MDC Inoti Kwete Pachikiribidi Chiri Kuitwa neZanu PF
Kubvumbi 10, 2008
Dare repamusoro reMDC raita musangano wekuzeya zviri kuitika munyika, rikabuda nezvisungo zvitanhatu zvarati zvichateverwa.
Zvisungo izvi zvinosanganisira kuramba kuverengwa patsva kwemavhoti, kuramba kuitwa zvakare kwesarudzo dzemutungamiri wenyika, kuti mauto ave mumakamba avo kwete kumbeya mbeya nenyika sezvaari kuita pari zvino achitysidzira vanhu, uye nyaya yemusangano wadaidzirwa neSADC neMugovera.
Bato reZanu PF riri kuda kuti mavhoti averengwe patsva mumatunhu anosvika makumi maviri nerimwe, ayo akatorwa neMDC. Zanu PF inonziwo yatotanga hurongwa hwekuitwa zvakare kwesarudzo yemutungamiri wenyika.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kushanyira vaive vakamirira bato ravo musarudzo, mapolling agents, vachivati vanodiwa pakuverengwa patsva kwemavhoti uku.